निशाको अमेरिका मोह ! - Movies Club Nepal
Home	News	निशाको अमेरिका मोह !
by Movie Club Nepal २६ मंसिर २०७६, बिहीबार ११:०४
फिल्म ‘मिशन पैसा’ बाट रजतपटमा प्रवेश गरेकी नायिका हुन् निशा अधिकारी । नायिका बन्नुपुर्व निशा नेपाली मोडेल थिइन् ।दशक भन्दा बढी समय रजतपटमा जिताएकी निशा अहिले फिल्मी पर्दाबाट लगभग टाढा भएकी छिन् । उनले फिल्म ‘झ्यानाकुटी’ मार्फत निर्माणमा समेत हात हलेकी थिइन् । हाल उनी अमेरिकामा छिन् । समय समयमा नेपाल आउजाउ पनि गरिरहेकी हुन्छिन् ।
उनले आफ्ना सुपुत्र ‘यूभान निशारद’ लाई अमेरिकामा जन्म दिएकी हुन् । अमेरिकामा नै सन्तानलाई जन्म दिदा सन्तानले सोझै अमेरिकाको नागरिकता पाउने भएकाले उनले छोरालाई अमेरिकामा नै जन्म दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । निशा मात्र होइन अन्य केही कलाकारले यो तरिका अपनाएका छन् । उनका श्रीमान शरद भेषवाकर भने क्रिकेटमा नै संघर्ष गरिरहेका छन् ।
निशाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण पनि गरिसकेकी छिन् । उनले सगरमाथा को सफल आरोहण सन् २०१३ मे १ का दिन गरेकी थिइन् । सर्वोच्च शिखर पुगेकी निशाको फिल्मी शिखर भने चुम्न सकेकी छैनन् ।
आफ्ना छोराको भविष्य सुनिष्चित भएपछि रजतपटमा फर्केलिन नफर्केलिन् त्यो भने समयले बताउने छ । उनले कुनै बाहना देखाएर फिल्मी पर्दामा आए अचम्म नमाने हुन्छ । आखिर पर्दाबाटै त हो सेलिब्रिटीको पहिचान बनाएको ।